ကလေးငယ်တွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်တားဆီးမလဲ? - Chit MayMay
Home Child Care ကလေးငယ်တွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်တားဆီးမလဲ?
ကလေးတွေဆိုတာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လူသားလေးတွေဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးတွေနဲ့ မေမေတို့ စိတ်ဆိုးရနိုင်တဲ့ အချိန်လေးတွေရှိပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ အလေ့အထတွေက လူမှုရေးအရ မသင့်လျော်တဲ့၊ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာမရှိတဲ့ ထပ်တလဲလဲ အပြုအမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးအများစုဟာ ဒီအကျင့်ဆိုးလေးတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်သော်လည်း ဒီအလေ့အကျင့်အနည်းငယ်က စိတ်ဖိစီးခြင်း၊ ငြီးငွေ့ခြင်း၊ စိတ်ပျက်ခြင်း၊ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း (သို့) ပင်ပန်းခြင်းရဲ့ အခြေခံလက္ခဏာတွေ ဖြစ်တာကို မေမေတို့ သတိရသင့်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ အလေ့အထကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ မိဘတစ်ယောက်ဟာ အလေ့အကျင့်ကိုယ်နှိုက်ထက် အကြောင်းတရားကို အာရုံစိုက်နိုင်ရင် ဒါကို ကိုင်တွယ်ရတာ လွယ်ကူလာပါတယ်။
လက်မစုပ်တဲ့အကျင့်က မွေးဖွားပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ စတင်တတ်ပြီး အသက် ၂နှစ်မှ ၄နှစ်အထိ အကျင့်ပါသွားတတ်ပါတယ်။ ၂နှစ်မှ ၃နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တွေဟာ သဘာဝအားဖြင့် လက်ချောင်းစုပ်တာကို ရပ်တန့်ပေမယ့် ဒီအကျင့်ကို ဖျောက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လက်မစုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက အစပိုင်းမှာ ကလေးငယ်တွေဟာ လုံခြုံမှုခံစားရစေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒါက တစ်ချို့ကလေးတွေအတွက် အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ သူတို့သက်သာရာရဖို့ (သို့) အိပ်ပျော်ဖို့ ကြိုးစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
လက်မစုပ်ခြင်းကို သွားပေါက်တဲ့အထိ တွေ့မြင်ရတာက စိုးရိမ်စရာမရှိသော်လည်း တကယ်လို့ ကလေးက ဆက်ကျင့်သုံးနေရင် ဒါက ကလေးရဲ့ သွားတန်းတွေအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီး တခြားသွားပြဿနာတွေကို ဦးတည်စေနိုင်ပါတယ်။
မေမေတို့ကလေးက နားလည်လွယ်တဲ့ အသက်အရွယ်ဖြစ်ရင် ဒီအကျင့်ဆိုးက ဘာ့ကြောင့် မကောင်းဘူးလဲဆိုတာ ရှင်းပြပါ။ သူတို့ ဒီလိုလုပ်တာကို ရပ်တန့်တဲ့အခါတိုင်း သူတို့ကို ဆုချပါ။
ဒီအလေ့အကျင့်က စိတ််ဖိစီးမှုတစ်ချို့ကို တုံ့ပြန်တာဆိုရင် ဒါကို ခွဲခြားသိမြင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ တခြားနည်းလမ်းနဲ့ ကလေးကို နှစ်သိမ့်မှုပေးပါ။
ကလေးက ဒါကို မသိစိတ်က လုပ်နေတာဆိုရင် သူတို့ကို ညင်ညင်သာသာ သတိပေးပါ။ အလေ့အကျင့်ကို ရပ်တန့်ဖို့ပြောပါ။
ကလေးတွေသာမက လူကြီးတွေလည်း စိတ်ဖိစီးမှုခံရတဲ့အခါ လက်သည်းကိုက်တဲ့ အလေ့အထရှိပါတယ်။ လက်သည်းကိုက်ခြင်းက ကလေးဘဝ အလေ့အထဆိုပေမယ့် အချိန်တန်လို့ မပြုပြင်ဘူးဆိုရင် လူကြီးအထိ စွဲစွဲလမ်းလမ်း ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
လက်သည်းကိုက်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကို မသိရှိရသော်လည််း ဒါက စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တာလို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
လက်သည်းကိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
စိတ်ဖိစီးမှု (သို့) စိတ်တင်းကျပ်မှုတွေကြောင့် သင့်ကလေး လက်သည်းကိုက်နေတယ်လို့ သဘောတူပါက အကြောင်းရင်းကို ကြိုးစားဖြေရှင်းပါ။
ဒါက စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် မဟုတ်ရင် ကလေးရဲ့ လက်တွေကို အလုပ်များနေအောင် ကြိုးစားပါ။ လက်သည်းနီဆိုးပေးထားတာမျိုး၊ papercrafts လိုမျိုး လက်မှုအနုပညာ လုပ်ခိုင်းတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေကို လက်သည်းဘာကြောင့် မကိုက်သင့်ကြောင်း ရှင်းပြပြီး ဒီအပြုအမှုကို ရပ်တန့်စေဖို့ ကြိုးစားပါ။
သူတို့ ဒီအလေ့အကျင့်ကို ရပ်တန့်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ သူတို့ကို ချီးမွမ်းပေးပါ။
ကလေးရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေ ခြောက်သွေ့တာတို့၊ နှုတ်ခမ်းကွဲတာတို့ကို မကြာခဏ တွေ့ပါက နှုတ်ခမ်းစုပ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအကျင့်ရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက နှုတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း (သို့) သွားမညီခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်၊ နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့တဲ့အခါ စိုစွက်အောင် နှုတ်ခမ်းကို လျက်တာ (သို့) နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
အချို့သောအခြေအနေတွေမှာ အပေါ်သွားက အောက်သွားထက် ကျော်ထွက်နေရင် နှုတ်ခမ်းကိုက်ခြင်း (သို့) နှုတ်ခမ်းစုပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သွားပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး တည့်မတ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းစုပ်ခြင်း (သို့) ကိုက်ခြင်းကြောင့် ပါးစပ်တစ်လျှောက် နီမြန်းခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ယားယံခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါက နာကျင်မှုနှင့် အဆင်မပြေမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အချို့ကိစ္စတွေမှာ နှုတ်ခမ်းတစ်သျှူးတွေကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
အသက်ကြီးတဲ့ကလေးတွေဆိုရင် နှုတ်ခမ်းခြောက်တာ ၊နှုတ်ခမ်းကွဲတာကို ကုသဖို့ lip balm (သို့) petroleum jelly ကိုလိမ်းပေးပါ။
တကယ်လို့ သူတို့ဟာ စိတ်ဖိစီးမှုရှိလို့ နှုတ်ခမ်းကိုက်တာဆိုရင် သူတို့ကို နှစ်သိမ့်ဖို့နှင့် အာရုံလွှဲဖို့ ကြိုးစားပါ။
နှုတ်ခမ်းခြောက်တာကို ကာကွယ်ဖို့ ရေများများသောက်ဖို့ အားပေးပါ။
-နှုတ်ခမ်းစုပ်တဲ့အကျင့်မှ အာရုံပြောင်းသွားအောင် သကြားမပါတဲ့ သကြားလုံးလေးတွေ ပေးထားပါ။
ကလေး အသက်အရွယ်အုပ်စုအားလုံးရဲ့ အများဆုံးအကျင့်တစ်ခုက နှာခေါင်းနှိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပျင်းတာကြောင့် (သို့) နှပ်တွေများလာတာကြောင့် ကလေးတွေဟာ ဒီအကျင့်ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါတယ်။
နှာခေါင်းနှိုက်ခြင်းနဲ့ လူမှုရေး အမည်းစက်က ဆက်နွယ်နေတဲ့အပြင် ဒီအကျင့်က နှာခေါင်းသွေးထွက်ခြင်း (သို့) ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကို နှာခေါင်းထဲသို့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နည်းနည်းကြီးတဲ့ ကလေးတွေအတွက် နှာခေါင်းနှိုက်ခြင်းက လူကြားထဲမှာ မကောင်းကြောင်း ညင်ညင်သာသာ ပြောပါ။ တစ်သျှူးတွေကို အသုံးပြုဖို့ သူတို့ကို အားပေးပါ။
ငယ်ရွယ်တဲ့ ကလေးတွေဆိုရင် နှာခေါင်းထဲသို့ လက်မထည့်စေဖို့ လက်အိတ်လေးတွေ ဝတ်ပေးထားပါ။
နှာခေါင်းအတွင်း သွေးထွက်ခြင်းနှင့် ပိုးဝင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ လက်သည်းတွေကို ညှပ်ပေးပါ။
သူတို့ရဲ့လက်တွေကို အလုပ်များနေစေဖို့ ကြိုးစားပါ။
Nemours ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အဆိုအရ ကလေးဆယ်ယောက်မှာ နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်လောက်က သွားကြိတ်ခြင်း ၊ အံကြိတ်ခြင်းများ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ အိပ်မောကျနေစဉ် (သို့) စိတ်ဖိစီးမှုများချိန်မှာ အများအားဖြင့် (ဆေးပညာအရ bruxism လို့ခေါ်တဲ့) သွားကြိတ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီအကျင့်ရဲ့အခြားအကြောင်းပြချက်က အပေါ်သွားနဲ့ အောက်သွား မညီတာ၊ သွားယားတာနှင့် နာကျင်မှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးအများစုက ငယ်သွားလဲချိန်မှာ ဒီအကျင့်ပျောက်သွားတတ်ပေမယ့် တခြားကလေးတွေကတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ထိ ဒီအကျင့်ပါသွားတတ်ပါတယ်။
ဒီအကျင့်ကို ရပ်တန့်ဖို့ မကြိုးစားခင်မှာ အကြောင်းရင်းကို ဖော်ထုတ်ပါ။ သွားပေါက်ခြင်းနှင့် ကြွက်သားနာခြင်းနှင့် ဆက်စပ်တဲ့ သွားကြိတ်ခြင်းက ယာယီသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းရင်းကို ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် Stress-related bruxism ကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကို ဘာက စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလဲ (သို့) ဘာက စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသလဲဆိုတာ မေးပါ။
အချို့ကိစ္စတွေမှာ သွားဆရာဝန်နဲ့ သွားပြခြင်းက အကူအညီဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သွားကြိတ်ခြင်းက အိပ်ချိန်မတိုင်ခင်(သို့) အိပ်နေချိန်အတွင်းမှာ ဖြစ်ရင် ရေနွေးနွေးချိုးပေးခြင်း (သို့) စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်စေခြင်းဖြင့် သူတို့ကို အိပ်ရာမဝင်ခင် relax လုပ်ပေးပါ။
ကလေးတွေက လူကြီးတွေကို အတုခိုးကြပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတွေ၊ တက်ဘလက်၊ လက်တော့ပ်တွေနှင့် တခြားကိရိယာတွေကို ကျွန်မတို့ အလွန်အကျွံသုံးတဲ့အခါ သူတို့သည် သဘာဝအလျောက်စွဲလမ်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင် ကလေးငြိမ်အောင်၊ ကလေးအလုပ်များနေအောင် ဖုန်းပေးထားတာမျိုးကလည်း ကလေးကို ဖုန်းစွဲလမ်းစေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
ဗီဒီယိုတွေကြည့်တာ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေ ကစားတာနဲ့ အချိန်ပိုကုန်လာတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကြီးထွားမှုရဲ့ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းက အသက် ၅နှစ်မတိုင်ခင်မှာ ဖြစ်ပျက်တာကြောင့် ကလေးတွေအနေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာခွင့်ပြုဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့ဟာ ဖန်သားပြင်နဲ့ မခွာဘူးဆိုရင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်ဝင်စားတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အမေရိကန် ကလေးအထူးကု အကယ်ဒမှ (APP)က ၁၈လမှ ၂၄လအောက် ကလေးတွေအား မိဘ (သို့) စောင့်ရှောက်သူများရှိမှသာ screen time ခွင့်ပေးသင့်ကြောင်းအကြံပြုထားပါတယ်။ အသက် ၂နှစ်မှ ၅နှစ်ကြား မူကြိုကလေးတွေအတွက် တစ်ရက်လျှင် တစ်နာရီသာ Screen Time ပေးသင့်ကြောင်း အကြံပြုထားပါတယ်။
screen အလွန်အကျွံကြည့်တဲ့ အကျင့်ကို ဘယ်လိုတားဆီးမလဲ?
ကလေးတွေကို ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်သာ စမတ်ကိရိယာတွေကို အသုံးပြုခွင့်ပေးပါ။
သူတို့ကို စမတ်ဖုန်းမတောင်းဖို့ အခြားပျော်စရာကောင်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ အလုပ်များနေစေပါ။
smart devices တွေကိုပေးကြည့်တဲ့အခါ သူတို့အနားမှာနေပါ။ သို့မှသာ သူတို့မြင်တွေ့ရတဲ့အရာတွေကို သူတို့အား ပြောပြနိုင်မှာပါ။ မှတ်ချက်ပေးပါ။ မေးခွန်းတွေ မေးပါ။ သင်ခန်းစာတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားလာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကလေးရှေ့မှာ ဖုန်းအသုံးပြုတာကို ကန့်သတ်ပါ။
၇။ Private Parts တွေကို ထိကိုင်ခြင်း
ထိကိုင်ခြင်း၊ ပွတ်ခြင်း၊ ဆွဲခြင်းဖြင့် Private Parts အပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို လေ့လာခြင်းဟာ ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေမှာ အများစုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီအပြုအမှုကို အသက် ၂နှစ်မှ ၆နှစ်အရွယ်မှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
သူတို့နည်းနည်းကြီးလာတာနှင့်အမျှ သူတပါးရဲ့ private parts ကိုကြည့်ခြင်း၊ ထိကိုင်ခြင်းနှင့် တခြားသူတွေကို သူတို့ရဲ့ သီးခြားအစိတ်အပိုင်းတွေကို ပြခြင်း၊ တခြားသူတွေရဲ့အဝတ်ဗလာခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး စပ်စုခြင်းကဲ့သို့သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမူအကျင့်တစ်ချို့ကို မေမေတို့ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဒီအပြုအမှုအားလုံးက သိလိုစိတ်ဖြင့် ပြုတတ်ပြီး များသောအားဖြင့် အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။
သင့်ကလေးကို ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေအကြောင်း သင်ပေးပါ။ လိင်အင်္ဂါတွေအပါအဝင် အစိတ်အပိုင်းအားလုံးရဲ့ အမည်တွေကို ပြောပြပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကြည့်ခြင်း (သို့) ထိခြင်းက အဆင်မပြေကြောင်း ၊ အခြားသူတွေက သူတို့ကို ဒီလိုလုပ်လာခြံရင်လည်း အဆင်မပြေကြောင်း ရှင်းပြပေးပါ။
ငယ်ရွယ်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ သီးသန့်အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ရှားဖို့ သင့်တော်တဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ဆင်ပေးပါ။
ကောင်းမွန်သော ထိတွေ့မှုနှင့် မကောင်းသော ထိတွေ့မှုတွေအကြောင်းကို ကလေးအား သင်ပေးပါ။
Previous articleသားသားမီးမီးတို့ ဖျားနာနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွေးမွေးသင့်တဲ့အစားအသောက်များ
Hein Myat - October 14, 2020 0